Mee ka ọnọdụ ahụ gị ka mma site na oge etiti oge mgbatị ahụ na oge Gam akporosis
Dị ka aha ya na-egosi n'asụsụ Bekee, Oge mgbatị bụ ngwa ọhụrụ na ngwa maka gam akporo nke iji dekọọ mmemme anyị na-eme na oge etiti oge. N'ime ọnwa ndị a ejidere na ọtụtụ na-erite uru iji rụọ ọrụ ha n'ụlọ, ngwa a na-akwụghị ụgwọ, ọ bụ ezie na yana mgbasa ozi, na-enye anyị ohere ịmepụta oge nke anyị iji soro ha ozugbo.
una mfe ngwa n'ihi na eziokwu nke na-eweta dị nnọọ iji ike ndị etiti oge, ọ bụ ezie na ọ nwekwara nhọrọ ma ọ bụ ihe ọzọ iji chekwaa oge etiti ma nye ha aha. Megharị ụkwụ gị agaghị abụ otu ọrụ gị arụ ọrụ ndị ahụ. N'ihi ya, ọ na-aghọ ihe na-akpali ngwa na ike ya na-edina na ịdị mfe ya. Gaa maka ya.
1 Mgbe coronavirus, ka anyị gaa n'ihu na omume
2 Atọ atọ ahụ ka hazie na Oge Nlekọta Oge
Mgbe coronavirus, ka anyị gaa n'ihu na omume
Ọ bụrụ na ịchọtala n'ụlọ gị na-eri nri karịa ma were ohere iji mee omume na nnukwu ahụ ọnụ ọgụgụ nke ndị na-azụ ihe n'ịntanetị site na Instagram na ọwa ndị ọzọ dị ka YouTube, ikekwe ngwa a ga - enyere gị aka ịhapụ ida omume ọhụụ ọ bụla ị na - eme kwa ụbọchị; na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume mgbe ụsọ mmiri dị izu ole na ole maka ndị nwere ike ịga ezumike, n’ihi na eziokwu bụ na n’oge ahụ ihe adịghị ka ezigbo mma.
Oge mgbatị bụ ngwa ọhụrụ maka gam akporo na abịa na ihe doro nnọọ anya Ma ị chọghị ịlafu n'akụkụ menus, ọtụtụ bọtịnụ na ndị niile na-eme nke ọma na ụdị ngwa ndị ọzọ dị ka nke a. Oge mgbatị bụ oge dị larịị ma dịkwa mfe.
Nke ahụ bụ, ị ga-enwe ike gbanwee ọtụtụ akụkụ iji mepụta ọzụzụ ahụ ị na-eme, ma ị na-eme nrụgide ma ọ bụ ịnọdụ ala, yana nke ị na- ọ na-ewe oge iji zuru ike nweta ume gị ma si otú a na-aga n'ihu na mmega ahụ. Akụkụ a bụ omume ọma ya kachasị mma na nke anyị chere na ọ nwere ike ịba uru dị ka ngwa ọrụ iji soro mmemme ndị ahụ kwa ụbọchị.
Atọ atọ ahụ ka hazie na Oge Nlekọta Oge
Oge ngosiputa ejiri mara ato nke anyi puru igbanwe. Nke mbụ bụ ọnụọgụ nke ntọala ma ọ bụ ugboro ugboro nke mmega ahụ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ mee usoro atọ nke ntinye iri onye ọ bụla n’ime oge ụfọdụ. Na oke nke setịpụrụ anyị tinye atọ. Ya mere, anyị gbanwee ya iji gaa na nhọrọ ọzọ.
Nke a bụ nke abụọ na nke metụtara ya oge nyere iji wuchaa ihe iri ahụ, Ịnọdụ ala 20 ma ọ bụ mmega ahụ ọ bụla anyị chọrọ ịme. Nke ahụ bụ, anyị ga-etinye oge na-emecha ya ka anyị wee nwee ike inye anyị ọrụ anyị ga-emecha oge x. Ọ bụrụ na anyị tinye nha iri atọ nke ntinye iri nke nkeji abụọ na nke ọ bụla, mgbe ahụ anyị nwere ihe ntinye 3 nke anyị ga-eme na nkeji isii.
Mana ị ga-eche na o nwere ike buru oke ibu, yabụ anyị nwere ntọala nke atọ ikenye oge ezumike nakwa na a na-eji ya iji nwetaghachi ume, ọ bụ ezie na ọ na-emeghe oge niile dịka mkpa nke omume gị. Nke a na-enye anyị ohere ịkewaa nkeji na sekọnd n'etiti etiti oge na etiti oge ọrụ.
Oge ndị ahụ ahaziri ahaziri ka anyị nwee ike ịme ihe omume anyị, nwekwara ike ịchekwa iji nweta ha n'ụzọ dị mfe ma si otu ahụ dị iche. Dịka anyị kwuburu, ọ bụghị otu ahụ ka mmega ahụ dị iche iche gabigara. Dị ka anyị nwere ike jiri mgbatị oge maka ọrụ ndị ọzọ dị ka ịmụ akwụkwọ. Nke ahụ bụ, anyị na-eche ihu ngwa ọrụ anyị nwere ike inye dị iche iche.
Oge nhazi oge bụ ngwa n'efu, ọ bụ ezie na ọ na-abịa na mgbasa ozi. N'oge a, anyị enweghị ike iwepu ya na micropayment, yabụ ị ga-eji ụdị nnweta ego a mara nke ọma ka onye nrụpụta wee jiri ozi ọma melite ya. Ọ gaghị adị njọ ma ọ bụrụ na etinyere ụdị mkpu ma ọ bụ ụda iji mara mgbe etiti oge gwụsịrị ma oge ezumike amalitela, yana nnọkọ nnọkọ ahụ na ọ ga-enye anyị ohere ịghara ịmara ihuenyo ahụ. Echefula ka Hiitmi dị ka ngwa mgbatị ahụ ọzọ.
Ngụ oge ọrụ: HIIT & Planning
Developer: Ogbe 96
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Oge mgbatị bụ ihe ọhụụ na ngwa dị mfe iji nwee ọdịdị oge